दीपक-दीपालाई चिठी :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
सन्चो-विसन्चो सोधेर लोकाचार पार्न थाल्दिनँ। हिजो छक्का पन्जा २ नामको सवा दुई घण्टे 'हास्य टेलिश्रृंखला' हेरेर आएदेखि दीपकजीसित फेरि रिस उठेको छ, दीपाजीसित चित्त दुखेको छ। यसो गरौं, पहिले रिसै शान्त पारौँ। चित्त दुखाउनेहरूको त यो संसारमा यसै पनि हिसाबकिताब छैन। त्यसमा पछि आउँला।
थाहा छ, तपाईं व्यस्त हुनुहुन्छ। आलोचना गरिएका सामग्री पढ्नमा तपाईंको रूचि छैन भन्ने कुरा त छक्कापन्जा १ र २ मा फरक नदेखिएबाटै बुझिएको हो। एउटी नसुनिएको नामकी लेखकले आलोचना गरेकी छ भन्ने सुन्नासाथ तपाईंले नाक खुम्च्याउँदै भनिसक्नुभो होला, 'कुनचाहिँ नारीवादीले काम पाइनछे फेरि।'
किनभने नि दीपकजी, तपाईंलाई थाहा छ, हाम्रो समाजमा महिलाका मुद्दामा महिलाबाहेक अरुले 'बोल्दिने' चलन छैन। कसैले सानो स्वरमा बोलिहाले पनि मन अमिल्याएर यति लामो लेखै लेखिबस्ने फुर्सद र जाँगर कसैसित हुँदैन।
सन्तान सप्रँदा छाती फुलाएर आफ्नो भन्ने अनि बिग्रँदा 'झिँगे'की आमालाई दोष दिने बाउ पात्र देखेर आमाहरूले अलिकति आँखीभौं खुम्च्याइदिएका भए!
अथवा माग्नेबुढाले 'बच्चा पाउन लाग्दा नि के के न हात्ती पाउनला'जस्तो गर्छन्' भन्दा कुनै आन्टीले थोरै चर्को स्वरमा'मुर्दार्! त्यसो भन्नीले पा'र देखा न!' भनिदिएको भए!
र यता त्यही हाँसोलाई आधार मानेर फिल्म 'राम्रो' भयो भन्ठानेर तपाईं हाँस्दै हुनुहुन्छ। र तपाईंहरू दुवैथरीको हाँसो देखेर डराएका छन् अर्का एकथरी मान्छे। लजाएका छन्। घिनाएका पनि छन्। म तिनैमध्येकी एक हुँ।
फिल्म रिलिज हुनु केहीअघि एउटा प्रतिष्ठित रेडियोबाट तपाईंले गर्वसाथ भन्नुभएको सुनेकी थिएँ, 'दीपकराजको गुडविलले गर्दा दसैँकै समयमा, अरु चलचित्रको भीडभाड नभईकन फिल्म रिलिज गर्न पाउने भएको!'
तर आज मलाई तपाईंको त्यो 'गुडविल' यस्सै बिनाअर्थ मान्छे हँसाउन मात्र खेर गएकोमा बडो दुःख लागेको छ। तपाईंको फिल्ममा आकांक्षा भन्ने पात्रको सट्टा आकाशलाई डिपेन्डेन्टमा अष्ट्रेलिया लाने युवतीको भूमिका मुख्य र सकारात्मकभइदिएको भए के बिग्रन्थ्यो? महिलालाई बलियो पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न तपाईंहरु किन हिच्किचाउनुहुन्छ?
'मैले त अपवाद पो ल्याको त' भन्नुहोला तपाईं। तर तपाईंका आँखाले किन हरेक कुराको अपवाद मात्र खोज्छन्? छक्कापन्जाका लागि पनि तपाईंले श्रीमान् विदेश गएपछि भएभरको एक्लोपन र जिम्मेवारीको भारी उठाएर पनि हरहप्ता शनिबारको ब्रत बस्ने आम महिलाहरूको पीडा र आँशुलाई देख्नुभएन, बस् 'टाप कस्ने'हरूको धोका मात्र देख्नुभो। पैसाका लागि जोसित, जस्तोसित पनि बिहे गर्न तयार हुने केटीहरू मात्र देख्नुभो। र छक्का पन्जा २ मा पनि उही गल्ती दोहोर्याउनुभो।
तपाईंको समस्या के रहेछ भने नि दीपकजी, एक त तपाईं हास्य विधाको फिल्ममा अत्यन्त संवेदनशील विषय ल्याएर जोत्नुहुन्छ, बिना अध्ययन र विवेक फिल्म बनाउनुहुन्छ अनि आफ्ना कमजोरीलाई छोप्न ‘अपवाद’ को लेप लगाइदिनुहुन्छ। यसबाट विषयको मर्ममा आघात पर्छ। यता 'कमेडी' दुख्छ, उता हलमा हाँसो गुन्जिन्छ। यता कतिपय ‘समीक्षक’हरू फिल्मको कमाइ हेरेर दङ्ग पर्छन्, उता कला दुख्छ, सुरुचि दुख्छ र मजस्ता धेरैको मन दुख्छ।
तपाईं भन्नुहोला मेरो काम मनोरन्जन दिने हो, समाज परिवर्तन गर्ने होइन। म पनि भन्दिनँ उसो त। 'थ्री इडियट्स' हेरेर बाउआमाले छोराछोरीमाथि आफ्नो सपना लाद्न छाड्ने हैनन्, 'होटल रुवान्डा' हेरेर म्यानमारका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले रोहिंज्याहरूको उठीबास लगाउन बन्द गर्ने पनि हैनन्।
कुनै पनि राम्रो फिल्मले सन्देश दिँदैन, ठाडो सन्देश त झन् दिँदै दिँदैन, जस्तो तपाईंले वकिलको रोलमा उभिएकी उमामार्फत् दर्शकमाझ थोपर्न खोज्नुभएको छ। फिल्मले दिने त ससाना कुरा हुन्, जस्तै, सपना देख्ने चाह, रहर, पखेँटापलाउने उत्साह, आत्मविश्वास, साहस, ऊर्जा आदि। संवेदनाका मार्फत्, न कि पात्रको भाषणबाट। तपाईंले फिल्ममा सन्देश भएन भन्नेहरुलाई जवाफ दिनुपर्छ भनेजसरी थोपर्नुभएको सन्देशको थुप्रोले त फिल्मलाई 'विकासे' स्वाद दिने काम मात्र गरेको छ, जुन संवाद भट्याउने पात्रले त छिनमै बिर्सन्छ, दर्शकले घर लैजाने त कुरै छाडौँ।
दीपकजी, यो चिठी लेख्नुको मेरो मतलब सबै पुरुष गलत र सबै महिला सही हुन्छन् भन्ने कदापि होइन। हामी दुवै सही पनि छौँ र गलत पनि छौँ। यसको उद्देश्य 'महिला मात्रको जयजयकार गरिदेऊ दीपक दाइ' भन्नु पनि हैन।
हो, यस्तै बेला दीपकजी, तपाईंजत्तिको 'गुडविल' भएका मान्छेहरूसँग हामीले थोरै भएपनि अपेक्षा राख्दा रहेछौँ, हौसलाको, साथको, सहयोगको, स्याबासीको। तर 'खेलकुद पत्रकार'ले लेखेको फिल्मको रिभ्यूलाई त 'अयोग्य'ठहर्याइदिनुभएको तपाईंलाई एउटी भर्खर लेख्न थालेकी ठिटीका कुराल कति छोलान् र भन्ने पनि लाग्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि केसम्म चाहिँ अनुरोध गर्छु भने तपाईंको कलमले हाम्रो स्वाभिमानको गाथा लेख्न जान्दैन भने पनि हाम्रो खिल्ली नउडाइकनै दर्शक हँसाउन सक्ने पटकथा भने लेख्न सकोस्! छक्का पन्जा २ को 'अपार सफलता' पहिल्यै आँकलन गरेर हिन्ट छोडिएको छक्का पन्जा ३ ले 'एनिहाउ, दर्शक हँसाऊ'को सिद्धान्तमा तपाईं आफैँलाई नछक्काओस्, अहिल्यैदेखि शुभकामना!
अब तपाईंको पालो। टाढाका वा टाढाका जस्तो गर्न खोज्नेहरूसँग त रिसाइन्छ। आफ्नैहरूसँग भने चित्त दुख्दो रहेछ। तपाईंलाई याद छ? धेरै पहिले साथीसँग मनका कुरा भन्ने एउटा रेडियो कार्यक्रममा तपाईंकी मिल्ने साथी र तपाईंको सम्बन्ध कसरी लामो समयसम्म टिकिरह्यो भन्ने सम्बन्धमा तपाईंले भन्नुभएको थियो, 'हामीबीच कहिल्यै पनि पैसा आएन। जब सम्बन्धको बीचमा पैसा आउँछ, तब आत्मीयता सिद्धियो भन्ने जाने हुन्छ।'
छक्का पन्जामा निर्देशक तपाईं भएको सुन्नासाथ मेरो मनमा गर्वको एउटा सानो पहाडै उभिएको थियो- 'वाह! दीपा दिदी निर्देशक!'
दीपाजी, चलचित्रको अनुमतिपत्रमा निर्देशकको ठाउँमा तपाईंको नाम देख्दादेख्दै पनि विश्वास नगरी मलाई भन्न मन छ, फिल्मको असली निर्देशक तपाईं हुँदै होइन। कागजमा तपाईंको नाम छ तर 'डि फ्याक्टो' निर्देशक त महिलालाई उडाउनु आफ्नो पुरुषार्थ संझने, पुरुषसरहको क्षमता त छोडौँ, महिलाको सुझबुझ वा बुद्धि हुन्छ भनेर पनि नठान्ने, फगत् आफ्नो लिङ्गमा गर्व गर्ने कुनै असंवेदनशील, ढोंगी मानिस हो। कुनै पनि महिलाले आफूलाई नारीवादी भनेर चिनाओस् वा ‘म नारीवादी चाहिँ होइन’ भनोस्, उसको मनमा महिलालाई उडाऊँ, नीच वा असक्षम देखाऊँ भन्ने भावना त हुँदै हुन्न। कि म भ्रममा परेँ दीपाजी?
स्क्रिप्ट लेखकलाई बाउ मान्ने हो भने भन्नै पर्छ, तपाईंका त दुवै फिल्मको बीऊ गतिलो परेन। तर तपाईंकै दोस्रो फिल्मले भनेको कुरो मान्ने हो भने पनि बाउको काम त रोपिदिने मात्र न रहेछ, हैन र? आमाले गर्भाशयमा राम्रो हेरचाह र वातावरण दिइन् भने त बीऊ कमसल परेकै बिरुवा पनि सुन्दर भएर पो हुर्कन्छ त। अरु त के कुरा, 'डि जुरे' अर्थात् नाममात्रकी आमा भएर सरोगेट नै गरे पनि बायोलोजी त आमाकै हुन्छ। अझै पनि तपाईंका फिल्म 'आमा गोता' जान किन नसकेका होलान्?
सोध्नुस्, के 'टाप कस्ने' हाम्रा आमाहरूका यौनचाहना अर्काकी स्वास्नी खोज्दै हिँड्ने कुनै 'राजा'का भन्दा दूषित छन्?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २४, २०७४, १२:२१:१४